मंगलवार, श्रावण २०, २०७७ ११:२९:१९ युनिकोड
शनिवार, आश्विन ११, २०७६ यार्सान्यूज
कवि म. वि. वि. शाहले स्वर्गकी अप्सराको संज्ञा दिनु भएको रारालाई नयनका यी परेलीमा राख्न भने भौगोलिक दुरी नजिकै भए पनि जुरेको थिएन । छोराको दोश्रो त्रैमासिक परिक्षा सकिए लगत्तै रारा भ्रमणको यात्रा तय गर्‍यौं, पल्सर १५० सिसिको मोटरसाइकलमा । एक –एक जोर बाक्लो न्यानो कपडा, केही खानेकुराको झोला अघिल्लो साँझ तयार पार्‍यौं । जम्मा तीन दिनको समय निकालेर भिन्न अनुभूती , भिन्न स्फूर्ती र भिन्न कौतुहलताको बीचमा यात्राको थालनी भयो । विहानको चिया खाजा खाईवरी कालिकोट मान्म वजारदेखि राराको लागि भनेर मोटरसाइकलमा हिड्यौं । विचमा छोरा कपिलजङ्ग सँगै साथमा गीतसँगको यात्राले केही रोमान्चित पनि अवस्य बनाएको थियो । हिड्नै लाग्दा झम झम पानी दर्कियो । अनि मैले भनें, यो वर्षाले हाम्रो यात्रालाई स्वागत गर्दैछ । मान्म वजार हुँदै ताडी वसपार्क पुगुन्जेलसम्म मेरो जुत्ता र पाईन्ट हिलाम्य भईसकेको थियो । वान वे भए पनि पिच गरिएको हुँदा नाग्म वजार (जुम्ला र कालिकोटको सीमानामा पर्ने ) सम्म त सजिलो भयो । बिहानको खाना डाँफे होटलमा । नाग्मागाड बजारबाट दुईवटा बाटो आउँछ । हिमा नदीमा लगाईएको वेलीब्रीज तरेर एक वाटो जुम्ला खलंगा वजार जान्छ भने अर्को बाटो हिमा नदीको नागवेली किनारै किनार । स्वीट्जरल्यान्डका टापुलाई समेत विर्साउने सिँजा दराका फाँटै फाँट मुगु जिल्ला जान्छ । जुन सडक कच्ची छ । वर्षा याम, पैजनी जस्तै मार्सी धानका बाला बजाउदै झम झम दर्केको पानीले कच्ची बाटोका खाल्डाहरु टम्म भरिएर झन्डै मोटरसाइकल डुव्थ्यो ।
नाग्मा, वालुवाटार हुँदै बुअ बड्किको हिलोमा म भिँजे, कपिल भिजे र गित भिजिन् । शरीरभरि हिलो लछाप्पै लाग्यो । हेण्डील थाम्दा थाम्दा हात थरक्कै थाके । यात्रा रमाइलो भए पनि केही चुनौती समेत थियो । पछाडी साली वसालेको मोटरसाइकल यदी ढालें भने त मेरो ईज्जत् पनि त्यही बड्की देहार गाउँ, आचार्यलिहिं र रनुकानाको हिलोमा डुव्न बेर छैन । निक्कै सावधानी पूर्वक ड्राइभ गरें । गोठिज्यूला सवै भन्दा बढी हिलो । बाटोमा मालवाहक ट्रक, ट्याक्टर, बस, मिनिबस र माईक्रो समेत चल्ने । सामान पनि यात्रु पनि ओभर लोड बोक्ने । नियन्त्रण, नियमन र अनुगमन गर्ने निकायको पातलो उपस्थिति हुने । मेरो लागि जोखिम र चुनौतीपूर्ण थियो यात्रा । छोरा र गीतले भने विभिन्न विषय प्रसंगका कुरा निकालेर रोमाञ्चकता थपेका थिए । चिसो वढ्दै थियो । भोक पनि असाध्यै लाग्ने । गोठिज्यूला एक खाजा पसलमा तातो तातो कोल (सीमिको झोल ) खाएर पुनः यात्रा जारी राख्यौं ।
झम्के साँझमा चौथा पुगियो । त्यो साँझ चौथामै वास भयो । अगेनाको तातो भुङ्ग्रोमा हात सेकाउदै च्याङ्ग्राको झोल, मार्सिको भात सिमीको दाल, आलुको तिहुन र गोलभेडाको अचार खायौं । खानाको पैसा लाग्ने तर लजिङ्को नलाग्ने । चिसो । ओड्ने, ओछ्याउने समेत चिसा । तीन खाटमा तीन करङ पल्टायौं ।
साहुजी पनि अति रमाइला । बुढा थर वताउने साहुले नाम सोधे । सवैले नाम बतायौं । जब गीतको नाम सुने अनि गीत गाउने अड्डी लिन थाले । रमाउदै १२ बज्यो । अनि चिसो विस्तरा जिन्दावाद । राती निन्द्रा परेन । जिउ दुख्न थाल्यो । यता उता पल्टिएँ ।बाबा छोराले बोलायो । मैले बोलाउनुको कारण सोधें । हतपत सवाल उठाई हाल्यो
यो बाटो बनाउने निकाय कुन हो ? मैले जवाफ दिएँ सडक बिभाग हो । सडक विभागलाई नेतृत्व गर्ने निकाय कुन हो ? मैले भनें, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय । अर्को सवाल थपी हाल्यो । अनि त्यो मन्त्रालयका मन्त्री को हुन ? मन्त्रीको पनि नाम भनें । कति हल्ला गरेको छ, अब सुत्न पर्दैन, बाबा थाक्नु भएको छ। आराम गर्न दिए हुदैन ? गीतले थर्काउने बेला निद नलागी नलागी छोरा चुप भयो ।
मन मनै गम खाएँ मैले पनि यो बाटोको अवस्था नाजुक छ । वस्ने आरामदायी होटल लजहरु छैनन् । स्वदेशी, बिदेशी पर्यटकहरूलाई कति सास्ती होला ? सरकारले नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० घोषणा गरेको छ । अधिकतम रुपमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु भित्र्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ । तर भौतिक पूर्वाधारहरु जिर्ण छन् ।
सम्भावनाले भरिएर फक्रीएका दुवोका सुन्दर फूलहरु भैसीको गोबरले पुरिएका छन् ।यस संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकका आशातित अपेक्षाहरु राज्यको तीन तह मध्ये कुन तहले पूरा गर्न सक्ला र ? काम गर्न सकिदैन भन्दै बर्सेनि कर्णाली प्रदेश सरकारको वजेट फ्रीज जान्छ तर हाम्रो रोड, बिजुली, बाटो, खानेपानी, शैक्षिक संस्थाहरूको समस्या झन झन झांगिदै छ ।
यावत कल्पना गर्दागर्दै भुसुक्क निदाएँ छु । ब्यूझँदा त सुन्दर विहानीले आफ्नो उपस्थिति जनाएको, चराहरु प्रभाती वनेका । चिया चमेना पश्चात् यात्राको निरन्तरता दियौं । घुचिको लेक माथी पुग्दा त उ टाढैबाट देखियो, आकाश झरेर धर्तिमा परे जस्तो । यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा अति ठूलो पानी कसरी जम्न सकेको होला । यो मनोरम दृश्यले थकान, भोक, प्यास सवै बिर्सायो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय नरेश भण्डारीज्यूद्वारा लिखित पुस्तक चाँदीको घेरामा उल्लेख भए अनुसारको मनोवाद मैले पनि गरें । करिव करिब ३ घण्टा राराको काखमा खेल्यौँ, त्यसपछि फर्कियौं । फर्किदाको हालत उहीँ त हो ।
रारा विकासको पर्खाइमा छ । रारालाई चिन्ने एक सक्षम नेतृत्वको पर्खाइमा छ । सुविधा सम्पन्न मोटर बाटो, विजुलीको पर्खाइमा छ ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, आश्विन ११, २०७६, ०४:५२:००